भाइटिकामा आउछु भनेका दाजु ४३ बर्ष बित्दा पनि आएनन, हङकङबाट बहिनिको रु’वा’बा’सी (भिडियो हेर्नुस) – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर १८, २०७८ समय: १५:४४:००
गोर्खा जिल्लाको ताङ्लीचोक फुर्केसोरा घुन्नेपाटा भन्ने ठाउमा घर भएका चन्द्र बहादुर गुरुङ पुर्णे नाम गरेका एक पुरुष बिगत ४३ बर्षदेखि बे”पत्ता भएको भन्दै उनकी बहिनी सुनिता गुरुङ जो अहिले हङकङमा रहेकी छिन उनी मिडियामा सहयोगको अपेक्षाका साथ आएकीछिन । छिमेकी देश भारतमा इन्डियन लाहुरे बन्छु भनेर हिडेका चन्द्रबहादुरको आज ४३ बर्षसम्म पनि कुनै खबर नरहेको बताउछिन उनि । यसैक्रममा आफ्नो दाजुलाइ खोजिदिनुपर्यो भन्दै आज मिडियाकर्मिसग सुनिता भिडियोकलमार्फत जोडिएकी छिन ।
भाइटिकामा आउछु है बहिनी भनेर घर छो”डेर हिडेका चन्द्रबहादुर आज ४३ वटा भाइटीका बि”तिसक्दा पनि फर्केनन । दाजुको यादको नाममा एउटा फोटो र उनैले लेखेको चिठी छ भन्दै रु”इन उनी । १५ १६ बर्ष त दाजुले लेखेको चिठी बोकेर हिडिन सुनिता तर अन्त्यमा ढु”ट्टो भएर गयो भन्छिन उनी । क”ठै दाजुको फोटो र चिठी हेरेर जिन्दगी बि”ताए तर मलाइ त्यो तिहार कहिल्यै आएन न त मेरो दाजु नै फिर्ता आउनुभयो ।
क”ठै ब”रा अझै दाजुको फोटो उनिसग सुरक्षित नै छ । दाजुभाइ भएर पनि टु”हु”रो पि”डि”त भए म भन्दै गु”ना”सो गर्छिन उनी । घरमा बुढी भएकी आमा छिन, उनका बाबूले त छोरो फर्किने आशमा आफ्नो सास नै गुमाए । तिन बर्ष भैसकेछ उनले यो संसार छोडेको । सास रहुन्जेल आश हुन्छ भनेझै बुढी भएकी ८० बर्षकि आमा छोरो फर्किने आशमा अझै कुरेर बसिरहेकिछिन ।
आजभोलि भन्दा भन्दै दाजुको घरजम भयो होला अनि बि”र्सियो होला भन्छिन उनी । क”ठै दाजुलाइ जहाँ भएपनी एकचोटि यो भिडियो हेर्नुभयो भने बाबू नरहेपनि आमा र बहिनी सम्झेर भएपनी एकचोटि सम्पर्कमा आउनु भन्दै बि”न्ती समेत बिसाइन । अझै दाजु फर्किने आश भने मारेकि छैनन उनले । क”ठै बाबुचाहिले पनि अन्तिम सास रहुन्जेलसम्म आफ्नो छोराको फोटो च्यापेर नै प्रा”ण त्यागेका रहेछ्न ।
आखिर कहाँ छ्न त चन्द्रबहादुर ? परिवारलाइ म”रितुल्त बनाएर कहाँ गए उनी ? छोराकै शो”कमा बाबू पनि बि”तेको बताउछिन उनी । दाइले बाल्यकालमा दाजुले गरेको माया स्याहारसुसार अझै बिर्सिएकीछैनन सुनिताले । दाइले सानोमा राखिदिएको नाम ‘कालि’ ‘टिउलि’ अझै याद छ उनलाइ । एउटा सामान्य जात्रामा जादा पनि मलाइ याद गर्ने मेरो दाइ आज यत्तिका बर्ष भैसक्दा पनि किन सम्झिएन भन्दै रु”न्छिन उनि ।
Last Updated on: December 4th, 2021 at 3:44 pm